PK | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Community & Society » PK	11
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Oct 13, 2015 in Community & Society, Cultures | 11 comments
Kaung Kin Pyar says: ဒီကားရွာထဲက အတော်များများကြည့်ပြီးကြလောက်ပြီ လေးပေါက်ရ…
OMG နဲ့ တွဲကြည့်ပါလေ… (ဒီ ပီခေလို ဘာသာရေးကို ဝေဖန်ထားတာပါပဲ…. အရင်ထွက်တာ..။ သို့သော်..ဒီကားလောက်တော့မကောင်း…)
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ပီကေ ကား တအားကောင်းတာ။
မြစပဲရိုး says: ဝီကီလိုက်တော့ ဒီလို တွေ့တယ်။
Tapasvi decides to confront PK on-air. During the debate,
PK says the “God that created us all” is the only one we should believe in,
and that the other “duplicate Gods” are created by man.
ကျွန်မတို့ သူကြီးမင်းက God ကို ရန်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး ကပေါက်ကြီး ရ။
အရောင် တစ်ခု နဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာ။
lol:-)))) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12062
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့ ဇာတ်ကား အနော့် စက်ထဲ ရှိနေပြီးတာ ကြာပြီ…
မကြည့်အားသေးတာနဲ့… အခုလို ညွှန်းမယ့်သူ ပေါ်လာတော့လည်း ကြည့်ချင်မိပြန်ရော…
HMM says: အဲကားကို ကျိချင်လို့လိုက်ရှာတာ eng sub ကရှာမရဘူး.. နောက်ဆုံးတော့ utube မှာကျိလိုက်ရတယ်..
ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်.. 3idiots လောက်ရင်ထဲမရောက်ဘူး
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ထွက်တာတော့ကြာပြီဆိုတော့ အတော်များများကြည့်ပြီးလောက်ပြီနေမှာ။
uncle gyi says: ကိုပေါက်တော့မဘသနဲ့တွေ့တော့မယ်
Mike says: .တော်တော်ကြိုက်တဲ့ကားပါ..ပြီးတော့အမှန်တွေကိုးဗျ
.ဗမာပြည်ဆို ဒီဇတ်ကားရိုက်သူရော သရုပ်ဆောင်တွေရော မဘသ .လက်ချက်နဲ့ထောင်နန်းစံနေရလောက်ပြီ..
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဘက အယေင်ဆောင်တွေ ရဟန်းအတုတွေကို
စိတ်ထဲက ဖယ်ထားတာ ကြာပေါ့
pooch says: ကြည့်ပြီးပြီ ကြည့်လို့ ကောင်းတယ် ကြိုက်တယ်
အိန္ဒိယလို အယူသီးတဲ့ တိုင်းပြည်မျိုးက ဒီလို ကားမျိုး ထွက်လာလို့တောင် အံ့သြနေတာ သူတို့တွေလည်း အပြောင်းအလဲကို လိုချင်လာပြီနေမှာ
ခုနောက်ပိုင်းကားတွေ က အတွေးအခေါ်ပါတာလေးတွေ များလာတယ် ဒီမှာလဲ ဒါမျိုးလေးတွေ ရိုက်စေချင်တယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မယ်ပုရေ